Isibhengezo esitsha seGlasgow malunga neNyathelo yeMozulu kuKhenketho Sisungulwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Isibhengezo esitsha seGlasgow malunga neNyathelo yeMozulu kuKhenketho Sisungulwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Xanduva • News Sustainability • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Isibhengezo esitsha seGlasgow
KwiNgqungquthela yeMozulu ye-COP26 kule veki, i-Tourism Declares a Climate Emergency, inyathelo lokuxhasa isenzo semozulu, iya kubhengeza ukuba ibe yinkqubo yemozulu ehamba phambili yeSiseko sokuHamba. Ukongezelela, iSiseko sokuHamba siya kutyhila indima yalo ekhethekileyo ekuboneleleni ngenkxaso eqhubekayo kwi-"Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism" esanda kuqaliswa, esebenza ngokubambisana ne-World Tourism Organization (UNWTO) yeZizwe eziManyeneyo.
Zombini izibhengezo zibeka iSiseko sokuHamba phambili kwiinzame zokuqinisekisa ukuba amashishini okhenketho kunye neendawo ekusingwa kuzo zinokukhutshwa ngokukhawuleza, ukuziqhelanisa nokutshintsha kwemozulu, kunye nokuxhasa ukuvuselelwa kwenkqubo yendalo.
I-Travel Foundation kunye ne-UNWTO zilandela intsebenziswano ukukhawulezisa iinjongo zeli nyathelo.
Bakwatyhala amabhongo eSibhengezo seGlasgow kwinqanaba lokuhlangabezana neenjongo zemozulu yehlabathi.
The ukuqaliswa kweSibhengezo saseGlasgow kwi-COP26 nge-4 kaNovemba iphawula inyathelo elibalulekileyo kwintshukumo yemozulu kukhenketho. Zomibini iZibhengezo zezoKhenketho kunye neSiseko sokuHamba zazingamalungu eKomiti yoYilo yeqela elihlanu leSibhengezo - ukuzibophelela kwehlabathi kuyo yonke imibutho yokuhamba kunye nokhenketho ukunciphisa ukukhutshwa kwecandelo ngesiqingatha nge-2030, ukulungelelanisa izicwangciso zesenzo semozulu kuzo zonke "iindlela" ezintlanu, kunye nokunika ingxelo esidlangalaleni ngenkqubela eyenziweyo.
Iyakhuthazwa yonke imibutho kuhambo nokhenketho xhasa iSibhengezo, kunye nendima yeziBhengezo zezoKhenketho iya kuba kukuxhasa, nokukhuthaza, intshukumo ekhawulezileyo yemozulu ngokugxininisa kubulungisa bemozulu kunye nokomelela, kunye neemfuno zoluntu lwendawo ekusingwa kuyo.
Ngokuzisa iZibhengezo zezoKhenketho ngaphakathi kwintlangano yayo kunye nokusebenzisana ne-UNWTO ukujongana nenyathelo le-Glasgow Declaration phambili, iSiseko sokuHamba siqinisa indima yaso ephambili njengombutho wokuya kwintshukumo yemozulu kukhenketho. Iya kuqalisa inkqubo yemisebenzi egxile kwimisebenzi efana nale:
Ukupapasha ingxelo yenkqubela phambili yonyaka yeSibhengezo seGlasgow, ukubonelela ngohlalutyo malunga nokuba ngubani osayine iSibhengezo, kunye nendlela abaqhubela phambili ngayo nezibophelelo zabo.
Ukuphuhlisa iindlela ezingaguqukiyo, zecandelo ngokubanzi kumlinganiselo wekhabhoni kunye nokunika ingxelo.
Iindlela zokuvavanya iindlela ezintsha zokujongana nobunzima, uxanduva olukwabelwanayo phantsi kwe "scope 3" (ikhonkco lexabiso) ukukhutshwa, okwenzeka kakhulu kwiindawo ekusingwa kuzo.
Ukomeleza intsebenziswano kunye noluntu - umzekelo ngokusebenzisa iTourism Declares online community and volunteer network, kunye nokusekwa okucwangcisiweyo kwee-hubs zengingqi.
Ukwakha amandla abo batyikitya isiBhengezo seGlasgow, kunye nokulinganisa ulwazi oluyimfuneko, izixhobo, kunye nenkuthazo efunekayo kutshintsho olubanzi lwecandelo.
ISiseko sokuHamba siza kukhokela ulungelelwaniso lweKomiti yeeNgcebiso kwiSibhengezo saseGlasgow esiza kuhlangana ngaphakathi kwesakhelo seNkqubo yoKhenketho eZinzileyo yePlanethi ye-UN ukuqinisekisa ukuba iyantlukwano, ukulingana, kunye inzululwazi yemozulu zisembindini weli nyathelo. Inkqubo yokunika ingxelo yemozulu edityaniswe neSibhengezo seGlasgow nayo iya kulawulwa ngeNethiwekhi yePlanethi enye.
UJeremy Smith, umseki weTourism Declares a Climate Emergency, uthe: “IsiBhengezo saseGlasgow ayisosithembiso nje – kukuzibophelela ekuthatheni amanyathelo okuphungula ngesiqingatha ukukhutshwa kwezokhenketho ngowama-2030, kunye nokunika ingxelo ngenkqubela eyenziwa minyaka le. Kubalulekile ukuba siqale ngamabhongo afanelekileyo, kodwa ke umsebenzi onzima uyaqala. Ukuba yinxalenye yeSiseko sokuHamba kusivumela ukuba sithathe iinzame zethu ukuya kwinqanaba elilandelayo lempembelelo yehlabathi. "
UJeremy Sampson, i-CEO yeSiseko sokuHamba, uthe: “Siyazi ukuba kufuneka sisebenzisane kwaye sinyuse isantya ngendlela esingazange sayenza ngaphambili, sinxibelelanisa zombini iindlela 'phezulu-phezulu' kunye 'nesezantsi-phezulu' ngokukhuthaza isenzo soluntu kunye nokudala iindlela zokutshintsha oorhulumente. kunye namaqumrhu. Inguqu yezoKhenketho ukuya kwimozulu entle ikwamalunga nenguqu yokhenketho ngokubanzi, itshintshela kwimodeli enobulungisa elungelelanisa iimfuno zabahlali kunye namashishini ngelixa ilawula kwaye inciphisa umthwalo wayo kwiindawo ekusingwa kuzo.”
ISiseko sokuHamba kunye neZibhengezo zoKhenketho ziya kuthatha inxaxheba kwisiganeko esisemthethweni se-COP26 kwi-intanethi ukuphawula ukuqaliswa kwe-Glasgow Declaration, ngoLwesine, ngoNovemba 4, kwi-1400-1600 GMT kunye nabalingane i-VisitScotland, i-NECSTourR kunye ne-Future of Tourism Coalition. Ungabhalisa ukujoyina kwaye uthathe inxaxheba kwingxoxo Apha.